किसानको मेहनतले हराभरा भयो बगर - समय-समाचार
समय-समाचार मंगलबार, २०७८ असार १ गते, १५:३७ मा प्रकाशित
अहिले बगरैभरी किसानको मेहनतको फल देखिएको छ । एक छाँटका आँप, लिचीका लहलहाउँदा बोट, बोटैभरी लटरम्म फल । केही वर्ष पहिले बगर थियो भनेर चिनिने कतै चिन्ह नै छैन अहिले । विभिन्न तरकारीका बोट र लहरा तँछाडमछाड गर्दै प्रतिष्पर्धामा हुर्की रहेझैँ लाग्छ । लहरे तरकारीका आँख्लैपिच्छे कलकलाउँदा चिचिला छन् ।
कतै घिरौँला त कतै फर्सीका हरिया कैँडा (गट्टा) फलेका छन् । भिण्डी (रामतोरई, रामझिङनी), खोर्सानी र भाण्टाका बोट पूmल, चिचिला र फलले लपक्कै नुहेका छन् । नेपालको माटोमा सुन फल्छ भन्ने आहान यहाँ चरितार्थ भएको यहाँ पुग्ने जोसुकैले पनि देख्न सक्छ ।
विसं २०६४ देखि रातुका तीन भँगालामध्ये पूर्वपश्चिमका भँगालामा तटवन्ध बाँध्न थालिएपछि अब माझको मात्र बहाव बनेको छ । पछिल्लो पटक अब बाढी पस्न छाड्यो भन्ने भएपछि २०७० सालयता किसानले बगर खोस्रन थालेका हुन् । अहिले २०७० सालयताको मेहनतले नै बगर अब हराभरा बगैँचा बनेको हो ।
बाढीले सुकुम्वासी बनेका किसान पछिल्ला छ÷सात वर्षयता सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपालको साथ पाएपछि बगरमा ‘सुन’ फलाउने भएका हुन् । पैरवी मञ्चले किसानलाई फलपूmलका बिरुवा, उन्नत जातका तरकारीका बीउ, आवश्यक प्राविधिक परामर्श र सिँचाइका लागि बोरिङ्ग व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
सग्रामपुर र पर्साका किसानले पहिलेको बालुबुर्ज २३५ बिगाहा बलौटे जग्गा खनी खोस्री गरेर नङ्रा खियाउन थालेका अब सात वर्ष भएको छ । पहिलेका दुई वर्ष बगर सम्याउन र खोस्रेर जग्गाजस्तो बनाउनै लागेको भङ्गाहा–६ पर्साका ६० वर्षीय किसान उत्तिम हुजेदार थारु बताउनुहुन्छ ।
“हामीले रुख बिरुवा २०७२ सालदेखि लगाउन थाल्यौँ, तरकारी खेती पनि त्यसैबेलादेखि थालिएको हो” हुजदारले भन्नुभयो, “मेहनतअनुसार अब पछाडि फर्कनु परेको छैन, एकपटक सुकुम्बासी बनेका हामी अब धर्तीमा उभिने भयौँ भन्ने लागेको छ ।” चार वर्ष (२०७२ देखि २०७६) तरकारी खेतीबाट राम्रो उत्पादन र आर्जन लिएपनि पछिल्ला दुई वर्ष (गत वर्ष र यसपालि) भने उत्पादित तरकारी कोरोना कहरले बजार पु¥याउन नसक्दा नोक्सान भएको हुजदारको बिलौना छ ।
“यसअघिका वर्ष राम्रै थिए, पछिल्ला दुई वर्ष माहामारीले धोखा दियो” बगर खेती गर्ने भङ्गाहा–७ धनषपुर दलित बस्तीकी रामरतिदेवीले भन्नुभयो–,“सधैँ एकनासको समय हुँदो रहेनछ, के गरौँ ? उत्पादन राम्रो भएर पनि बजार पु¥याउन नसक्दा थला प¥यौँ ।” आँप, लिची, कागती र मेवासहितका फलका बोट अब राम्ररी फल्ने भएका छन् र अब यिनैले उकास्ने रामरतिसहितका किसानको आश छ ।
रामज्योतिको एक बिगाहा नदीउकास जग्गामा ७६ वटा आँपका कलम हुर्केका छन् । मालदह, आम्रपाली, बम्वैसहित स्वादमा उम्दा मानिने आँप । यसै जग्गामा परवल, लौका, बोडी, करेलासहितका लहरे तरकारी बाली लहलहाएको देखिन्छ । रामज्योतिजस्तै पर्सा बस्तीका बिन्दादेबी हुजदार र पुनमदेबी हुजदार पनि अहिले रातोदिन बगर बगैंचा र त्यहाँको तरकारी खेतीमा ब्यस्त देखिन्छन् ।
आफ्नो १२ कठ्ठा बगर खेतमा ५६ वटा आँपका रुख लगाउनु भएका किसान शङ्कर हुजदारले २०७६ सालमा खोर्सानी, हर्दी (बेसार) जस्ता मसला र मौसमी तरकारी बालीबाट दुईलाख बचत भएको बताउनुभयो । त्यसयता महाव्याधि कहरले खासै नगद बचाउन नसकेपनि घरखर्च भने टारेको उहाँको भनाइ छ । बगर बगैंचा र तरकारी खेती थालेका यहाँका किसानले मौसमी तरकारी खेतीमात्र लगाउने गरेका छन् ।
“बेमौसमी तरकारी खेतीमा विषादिको धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ” किसान पुनमदेवी हुजदार भन्नुहुन्छ, “बेमौसमी तरकारी खेती मँहगो र विषादिको प्रयोगले स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक हुन्छ नि ! त्यसैले हामी मौसमी तरकारी खेती नै गर्छौं ।” यो प्राङ्गारिक खेतीको परिचयले आफ्ना निकै ग्राहक बढेका किसानको अनुभव छ ।
विसं २०३० को बाढीले जग्गा सबै काटेर बलौटो थुपारेपछि पर्साका आदिवासी थारु लालपुर्जामा जग्गा भएपनि सुकुम्वासी भएका थिए । विसं २०६४ यता जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले रातु नदीका तीन भँगाला बाँधेर एउटामा मात्र पानी बग्ने बनाइएपछि नदीउकास भएको त्यहाँको बगरमा पैरवी मञ्चले बगर खेती गर्न किसानलाई उत्साहित बनाएपछि त्यसयता आदिवासी थारु अब अब्बल किसानमा दरिएका छन् ।
पर्सा, सग्रामपुर र धनषपुरसहित तीन बस्तीका १५५ परिवारले बगैँचा लगाइएको बगरमा मौसमी तरकारीबाली लगाएर बर्सेनी लाखौँ आम्दानी गरिरहेका पर्सा बस्तीकै सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता रामनारायण हुजदार बताउनुहुन्छ ।